Dhacdo Naxdin Leh: “Sacdiyo Waan ka Quustay Guur Dambe” | Gaaloos.com
Home » galmada » Dhacdo Naxdin Leh: “Sacdiyo Waan ka Quustay Guur Dambe”
Dhacdo Naxdin Leh: “Sacdiyo Waan ka Quustay Guur Dambe”
Magaca Sacdiyo Xasan da’deedu Waa 19 jir wax ay dhiganeysay dugsiga-sare fasalka 1aad, waxayna is-barteen wiil ay daris ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Farxaan Axmed, waxaana dhexmaray Sacdiyo iyo Farxaan xariir aad u wanaagsan xariirkaas oo ku dhisnaa Jaceyl, is-qaddarin, xushmad, wanaag iyo is-karaameyn.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la gaaray maalintii lagu ballamay inuu dhaco meherkii Sacdiyo iyo qaaligeeda, Farxaan, waxaana loo dhigay xaflad si weyn loosoo abaabulay isla markii ay xafladdii dhamaatay ayaa haddana aqbaar kale oo aan asna dhagaha u rooneyn soo yeeray kaas oo ahaa in wiilkii farxaan ahaa hooyadiis ay xabad wiifto ah madaxa ka haleeshay isbitaalka intii loo wadayna ay naf baxday! Waa markale iyo musiibo hor leh farxad lagu daray murugo waa yaab iyo amakaag aan horay loo arag! Wiilkii Farxaan ahaa waxa uu aaday meydkii hooyadiis si uu aaskeeda uga qeyb qaato.
Subaxii markii la gaaray bey booqatay isbitaalkii ummaddii oo dhanna wey ka rumeysan weyday inuu geeriyooday lammaniheedii ay dunida ugu jecleyd si ay u quusatana waxaa la geeyay qolkii meydkiisa lagu dhaqaayay indhaheeda ayayna ku samirtay!
Title: Dhacdo Naxdin Leh: “Sacdiyo Waan ka Quustay Guur Dambe”